ဈေးနှုန်း ပလန်များ | /// stage /// – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
ENGLISH Attack! ဈေးနှုန်း အစီအစဉ်များ။
သင်၏ အထူးမြှင့်တင်ခြင်းလက်မှတ်ဖြင့် လေ့လာနိုင်သော အကန့်အသတ်မရှိ အင်္ဂလိပ်စာ
အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာများ အားလုံးအတွက် ဝင်ရောက်ရယူနိုင်မှု
လစဉ် € 11.99 ပေးရသည်။
လစဉ် $ 14.99 ပေးရသည်။
လစဉ် R$ 35.90 ပေးရသည်။
လစဉ် ¥ 99.90 ပေးရသည်။
$ 29 900/လ
လစဉ် $ 29 900 ပေးရသည်။
လစဉ် Kč 299 ပေးရသည်။
လစဉ် £ 9.99 ပေးရသည်။
လစဉ် ₹ 999 ပေးရသည်။
¥ 1 499/လ
လစဉ် ¥ 1 499 ပေးရသည်။
₩ 16 900/လ
လစဉ် ₩ 16 900 ပေးရသည်။
လစဉ် $ 199 ပေးရသည်။
လစဉ် zł 49.99 ပေးရသည်။
လစဉ် lei 49.99 ပေးရသည်။
လစဉ် рубx 499 ပေးရသည်။
လစဉ် ฿ 499 ပေးရသည်။
လစဉ် TL 29.90 ပေးရသည်။
လစဉ် NT$ 449 ပေးရသည်။
လစဉ် CHF 14.99 ပေးရသည်။
Дин. 1 299/လ
လစဉ် Дин. 1 299 ပေးရသည်။
လစဉ် ₴ 119 ပေးရသည်။
လစဉ် SAR 59.90 ပေးရသည်။
Rp 194 900/လ
လစဉ် Rp 194 900 ပေးရသည်။
₨2090/လ
လစဉ် ₨2090 ပေးရသည်။
₫ 334 000/လ
လစဉ် ₫ 334 000 ပေးရသည်။
လစဉ် AR$ 129.90 ပေးရသည်။
$ 8 990/လ
လစဉ် $ 8 990 ပေးရသည်။
လစဉ် S/. 44.90 ပေးရသည်။
လစဉ် Bs 99.90 ပေးရသည်။
လစဉ် £ 109.90 ပေးရသည်။
လစဉ် MAD 129.90 ပေးရသည်။
လစဉ် AED 59.90 ပေးရသည်။
လစဉ် RM 54.90 ပေးရသည်။
လစဉ် KWD 4.49 ပေးရသည်။
လစဉ် $ 17.99 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ € 47.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ $ 59.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ R$ 149.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ ¥ 389.40 ပေးရသည်။
$ 19 900/လ
ခြောက်လတစ်ခါ $ 119 400 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ Kč 1 194 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ £ 41.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ ₹3894 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ ¥5994 ပေးရသည်။
₩ 11 900/လ
ခြောက်လတစ်ခါ ₩ 71 400 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ $ 834 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ zł 209.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ lei 209.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ рубx2094 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ ฿2094 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ TL 119.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ NT$ 1 794 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ CHF 59.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ Дин.5094 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ ₴ 474 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ SAR 239.40 ပေးရသည်။
Rp 129 900/လ
ခြောက်လတစ်ခါ Rp 779 400 ပေးရသည်။
₨ 1 390/လ
ခြောက်လတစ်ခါ ₨ 8 340 ပေးရသည်။
₫ 219 000/လ
ခြောက်လတစ်ခါ ₫ 1 314 000 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ AR$ 509.40 ပေးရသည်။
$5990/လ
ခြောက်လတစ်ခါ $ 35 940 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ S/. 179.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ Bs 419.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ £ 449.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ MAD 509.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ AED 239.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ RM 215.40 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ KWD 17.94 ပေးရသည်။
ခြောက်လတစ်ခါ $ 71.94 ပေးရသည်။
တစ်ခေါက်သာ € 71.88 ခပေးရပါသည်။
အလိုလျောက် အသစ်ပြန်ဖြစ်မှု မရှိပါ။
တစ်ခေါက်သာ $ 95.88 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ R$ 214.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ¥ 598.80 ခပေးရပါသည်။
$ 14 900/လ
တစ်ခေါက်သာ $ 178 800 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ Kč 1 788 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ £ 59.88 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ₹5988 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ¥ 8 988 ခပေးရပါသည်။
₩ 8 900/လ
တစ်ခေါက်သာ ₩ 106 800 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ $ 1 188 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ zł 299.88 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ lei 299.88 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ рубx2988 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ฿2988 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ TL 178.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ NT$2748 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ CHF 89.88 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ Дин.7788 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ₴ 708 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ SAR 358.80 ခပေးရပါသည်။
Rp 99 900/လ
တစ်ခေါက်သာ Rp 1 198 800 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ₨ 11 880 ခပေးရပါသည်။
₫ 169 000/လ
တစ်ခေါက်သာ ₫2028 000 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ AR$ 778.80 ခပေးရပါသည်။
$4490/လ
တစ်ခေါက်သာ $ 53 880 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ S/. 262.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ Bs 598.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ £ 658.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ MAD 778.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ AED 358.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ RM 322.80 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ KWD 27.48 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ $ 107.88 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ € 119.76 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ $ 143.76 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ R$ 357.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ¥ 957.60 ခပေးရပါသည်။
$ 12 900/လ
တစ်ခေါက်သာ $ 309 600 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ Kč3096 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ £ 95.76 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ₹9576 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ¥ 15 576 ခပေးရပါသည်။
₩6900/လ
တစ်ခေါက်သာ ₩ 165 600 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ $ 1 896 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ zł 479.76 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ lei 479.76 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ рубx4776 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ฿4776 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ TL 309.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ NT$4536 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ CHF 143.76 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ Дин. 13 176 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ₴ 1 176 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ SAR 597.60 ခပေးရပါသည်။
Rp 79 900/လ
တစ်ခေါက်သာ Rp 1 917 600 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ ₨ 20 376 ခပေးရပါသည်။
₫ 139 000/လ
တစ်ခေါက်သာ ₫3336 000 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ AR$ 1 317.60 ခပေးရပါသည်။
$3690/လ
တစ်ခေါက်သာ $ 88 560 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ S/. 453.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ Bs 1 005.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ £ 1 077.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ MAD 1 317.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ AED 597.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ RM 549.60 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ KWD 45.36 ခပေးရပါသည်။
တစ်ခေါက်သာ $ 179.76 ခပေးရပါသည်။
ပြန်လည်ရယူသော မှာယူမှုများသည် သင်ရွေးချယ်ထားသော မှာယူမှု ကာလ ကုန်ဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် အလိုအလျေက် အသစ်ပြန်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်သော ငွေပေးချေမှုများသည် ပယ်ဖျက်မှု မပြုလုပ်မခြင်း ရှေ့ဆက်သွားနေမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အချိန်မရွေးပယ်ဖျက်မှု ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ဝယ်ယူထားပြီးသော ဝင်ရောက်မှုအတွက် ကိုမူ ပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မိသားစုဝင်တစ်ယောက်အတွက် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အတွက် English Attack! ကို မှာယူလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ဆောင်ကတ်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။ လက်ဆောင် ကတ်
အမျိုးအစားများနှင့် ခက်ခဲမှု အပေါ် စီစဉ်ထားသော လေ့ကျင့်ခန်းများကို1042 Video Booster ဝင်ရောက် ရယူပါ။
307 လေ့လာနိုင်သော Photo Vocab ပုံပြအဘိဓာန် များအဖြစ် စုစည်းထားသော 4912အင်္ဂလိပ် ဖွင့်ဆိုချက်များကို ဝင်ရောက်ရယူပါ။
စုစည်းမှု ၂၅၀၀ ကျော် ပါသော လေ့ကျင့်ရေး ဂိမ်းများ အားလုံးကို ရယူပါ။
Verb Dash.ဖြင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဗဘ် များကို တစ်ခါတည်းနှင့် အကုန် လုံးလေ့လာပါ။
Say Whatဗီဒီယို ကာရာအိုကေ ဂိမ်းဖြင့် သင်၏ နားထောင်နိုင်စွန်းကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
မေးခွန်း သို့မဟုတ် ပြောချင်တာများရှိပါသလား။ တိုးမြှင့်မှု ပြုလုပ်ရာမှာ အခက်အခဲရှိနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တိုကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
အရမ်းကောင်းပါတယ်! ဒီဆိုတ် က တကယ်ကို ပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာရတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အလုပ်တစ်လုလိုမဟုတ်ပဲ ဝါသနာတခုလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် ဟာ အထူးမန်ဘာဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော် ဒီလေ့လာရေး ယူနစ်တွေကို ရှာဖွေသင်ယူရတာကို နှစ်သက်သလိုပဲ ရာပေါင်းများစွာရှိပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို လေ့လာနိုင်ခဲ့ရုံမက ဒါတွေကို ကျွန်တော် မှတ်တောင် မှတ်မိနေပါသေးတယ်!
အင်္ဂလိပ်က ကျွန်တော့် အလုပ်အတွက် အရေးကြီးလို့ ကျွန်တော် လည်းေ့မြာက်များစွာသော အွန်လိုင်း အင်္ဂလိပ် သင်ယူမှုနည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရက်နည်းနည်းကြာရင် လက်လျှော့လိုက်တာချည်းပဲ။ အခုတော့English Attack! ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ ကို တစ်ပတ်မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့်နေပါပြီ။ ဗီဒီယို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ဂိမ်းတွေနဲ့ လေ့လာရတာကို ကျွန်တော် အရမ်းနှစ်သက်သဘောကျပါတယ်။